Sary nataon'i Craig Alan an'i Picasso, Joker ary bebe kokoa | Famoronana an-tserasera
Rehefa misy mihoatra ny hitan'ny maso ny fanoharana iray
Craig Alan dia mpanakanto iray izay mamokatra andian-tsary manahirana izay misy maso kely sy fahaizana mifantoka amin'ny antsipiriany dia afaka mahita fahagagana samihafa isika.
Ny sasany amin'ny asany kanto ve dia gaga fa be pitsiny tokoa izy ireo ary noho izay rehetra nafeniny. Toy ny rehefa manomboka mitady an'i Wally isika, eto dia hiaina toe-javatra samihafa ary koa hafatra sasany manambara.
Alan dia mampiseho ny asany amin'ny olona an'aliny ao a pose sy pose isan-karazany. Izy rehetra dia afaka misolo tena ny sarin'olona malaza avy amin'ny tantara foronina sy ny zava-misy.
Ilay Joker tenany, izay ahitanao ireo badisy misy teny filamatra samihafa. Craig Alan mandany fotoana be dia be sary ny tsirairay amin'ireo fanoharana ireo izay ilazana zavatra betsaka kokoa.
Manakaiky kokoa fotsiny ny mahatsapa fa misy karazana seho an-tsehatra ataon'ny olona tsy fantatra anarana. Ny tsirairay amin'ireo ny olona dia manana ny orinasany manokana ary toetra. Mazava fa i Alan dia afaka nanokana fotoana hanomezana azy ireo fiainana manokana ary azontsika atao ny mahita amin'ny fotoana kely laninay mijery ireo fanoharana nataony.
Ary tsy nandao ny fotoana izy Sariitatra fandokoana ny namanao ary mpikambana ao amin'ny fianakaviany. Andiana olona miavaka tsara izay voajanahary tanteraka ny sary.
Afaka mahita tarehin-tsoratra isika ny sary hosodoko toa an'i Picasso, na i John Lennon tenany ao anaty sary izay nomena fahaleovan-tena sy fomba fijery lehibe. Avelanay ianao ny instagram mba hahafahanao manaraka ny diany sy ireo fanoharana rehetra navelany hatao. Mpanakanto iray izay mampiasa faharetana ho fitaovam-piadiana lehibe hanehoana endrika olona marobe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Rehefa misy mihoatra ny hitan'ny maso ny fanoharana iray
Ireo sary tsy misy dikany mahavariana any an'efitra Namibianina
Mamorona haingana sary masina be dia be miaraka amin'ny fanampian'i Marc Edwards